बालविवाह न्यनिकरणका लागि कावासोतीमा अभिमुखीकरण - Darpanpost
» प्रमुख समाचार अंक: 10371
बालविवाह न्यनिकरणका लागि कावासोतीमा अभिमुखीकरण
Darpanpost बिहिबार, आषाढ ०७, २०७५ मा प्रकाशित
नवलपरासी , ७ असार। कावासोती नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका बनाउने उदेश्य सहित बालविवाह न्यनिकरण सम्बन्धि एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आज कावासोतीमा भएको छ ।
नगरपालिकाभित्र रहेका बालक्लबकका प्रतिनिधी तथा महिला संजाका प्रतिनिधीहरुका लागि अभिमुखीकरण गरिएको हो । बालविवाह भनेको के हो ? बालविवाहबाट हुने समस्या तथा बालविवाह सम्बन्धि ऐन कानुन कस्ता छन ? भन्ने वारेमा कार्यक्रममा सहजीकरण गरिएको थियो ।
बालविवाहका वारेमा सहजीकरण गर्दै कावासोती नगरपालिकाका नगरशिक्षा अधिकृत कृष्णचन्द्र पोख्रेलले नेपालमा अझैपनि ४१ प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको बालविवाह हुने गरेको बताएका थिए । १८ वर्ष उमेरसम्म बालबालिका भए पनि २० वर्षभन्दा पहिले गरिने विवाह बालविवाह भएकाले २० वर्षपछि मात्रै विवाह गर्नुपर्ने बताएका थिए । बालविवाह गराउने अभिभावकदेखि लमी र सहभागि बन्नेलाई समेत कानुनी सजाय हुने भएकाले कोहि कसैले पनि २० वर्षभन्दा पहिले आफ्ना छोराछोरीको विवाह गर्न गराउन नहुने उनले जानकारी दिए ।
यस्तै कावासोती नगरपालिकाकी बालपरामर्शदाता विना प्युठानीले बालविवाहबाट हुने समस्याका वारेमा जानकारी गराएकी थिईन । सानै उमेर विवाह गर्दा बालिकाहरुमा शारीरिक समस्या उत्पन्न हुने र बालकहरुमा पनि बोझ थपिदा मानसिक समस्या हुने हुदा बालविवाहलाई कोहि कसैले पनि प्रोत्साहन गर्न नहुने उनले बताईन । यस्तै पछिल्लो समय बालबालिकाहरुले आफ्नो खुसीले भागेर विवाह गर्नेक्रम बढेकाले यस समस्या रोक्न अभिभावकले बालबालिकाको मनोभावना बुझेर व्यवहार गर्नुपर्ने र उनीहरुको कृयाकलापका वारेमा ख्याल गर्नूपर्ने बताईन ।
यस्तै कावासोती नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्नका लागि विभिन्न ४५ वटा सुचक पुरा गर्नुपर्ने र जसमध्ये एउटा बालविवाह न्यनिकरण समेत रहेकाले स्वयम बालबालिकालाई नै यसका वारेमा जानकारी प्रदान गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्युठानीले बताईन ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाका १७ वटा वडाका बालक्लबका दुई÷दुईजना गरि ३४ जना र महिला संजालका गरि ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रम कावासोती नगरपालिकाकी प्रमुख चन्द्रा कुमारी पुनको अध्यक्षतामा भएको थियो ।